Sing Swim Sway.....: 06/2008
လောင်စာဆီ တစ်နေ့တစ်ခြား ကြီးမြင့်လာတဲ့ ဒီကနေ့မှာ အစားထိုးလောင်စာစွမ်းအင် သုံးဖို့ ပြောကြတာ ပိုကြားလာနေပါရတယ်။ စွမ်းအင်အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ အဓိကသုံးစွဲရာဖြစ်တဲ့ ရေနံစိမ်းဈေးနှူန်းဟာ မနှစ်က တစည်ကို ၇၀ ဒေါ်လာကနေ ပြီးတော့ အခုလက်ရှိ ၁၄၀ ဒေါ်လာကို ခုန်ပျံကျော်လွား ရောက်လာပါပြီ။ (တစ်ချို့ကတော့ ၂၀၀၈ နှစ်ကုန်မှာ တစ်စည် ဒေါ်လာ ၂၀၀ လောက်အထိ ဖြစ်လာမယ်လို့ မှန်းထားပါတယ်။
အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ အစားထိုးလောင်စာ (အဓိက ရေ၊နေ၊လေ၊ ဘူမိအပူ၊နဲ့ လယ်ယာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း) စွမ်းအင်သုံးဖို့ သင့်တော်ပါပြီလား။ မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိ အနေအထားအရ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မိသားစု အနေနဲ့ အိမ်သုံးအတွက်တော့ တွက်ခြေကိုက် သုံးစွဲဖို့ ခက်နေပါသေးတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားက အားသာချက် မရသေးပါဘူး။ (ဒီဆောင်းပါးမှာ နေ နဲ့ လေ စွမ်းအင်အကြောင်းကိုပဲ အလေးထားပြောသွားမှာပါ။ ) အကြောင်းတွေက တော့
၁။ အစဦး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု စရိတ် အရမ်းကြီးနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ဆိုလာပြားတို့၊ လေဒလက်တို့ ဝယ်ရတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ ပိုဈေးကြီးတာပေါ့။ တစ်ချို့ထုပ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အစီုးရက တပ်ဆင်သုံးစွဲ စရိတ်တစ်ချို့ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အကုန်လုံး ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် ဆိုတော့ ဈေးပေါလာတဲ့အထိ (ရေနံဈေးနဲ့ကာမိတဲ့အထိ) စောင့်ရအုံးမှာပါ။
ထိုင်းက ပြုလုပ်တဲ့ Research (၂၀၀၇)အရ စွမ်းအင် Mass Produc tion ထုပ်လုပ်တဲ့ စရိတ်ကတော့ ရေစွမ်းအင်က အပေါဆုံးပါ။ ဒုတိယကတော့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တာဘိုင်စက်ရုံပါ။ (သူတို့မှာ ညူကလီးယား စက်ရုံမရှိသေးတဲ့အတွက် အဲဒီအတွက်တော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ထုပ်လုပ်မှုစရိတ်က သဘာဝရုပ်ကြွင်းလောင်စာသုံး စက်ရုံတွေထက် သက်သာပါတယ်။)အကြမ်းဖျင်း ကိန်းဂဏန်းအရ လျှပ်စစ် ၁ ယူနစ် (နာရီကီလိုဝပ်)ထုပ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်က တော့ ထိုင်းဘတ်အနေနဲ့ ရေ - ၁.၅၊ ဂစ်စ် ၄.၀၊ လေ ၈.၀ နဲ့ နေ က ၁၂.၀ လောက် ကျသင့်ပါတယ်။ (ဒီကနေ့ ၁ ဘတ်ကို ၃၆ ကျပ်လောက် ပေါက်နေပါတယ်။)
၂။ သဘာဝစွမ်းအင် ထုပ်လုပ်ဖို့ ရေ၊မြေ အနေအထား အကောင်းဆုံးမှာ မရှိပါဘူး။ လေစွမ်းအင် စီးပွားဖြစ် ထုပ်လုပ်နေတဲ့ တစ်ချို့ ဥရောပနိုင်ငံနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် မြန်မာတစ်ပြည်လုံးရဲ့ ပျမ်းမျှလေတိုက်နှုန်းနဲ့ တိုက်ခတ်မှု ပုံစံက လေစွမ်းအင်အတွက် အားရစရာ မရှိပါဘူး။ ဆိုလာစွမ်းအင် အနေနဲ့ အီကွေတာနဲ့ နီးလို့ နေရဲ့ပြင်းအားကောင်းသော်လည်း မုတ်သုန်ရာသီဥတု ရရှိတဲ့၊ မီုးများပြီး တီမ်ထူတဲ့ အောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ နေရောင်ကျရောက်ချိန် နည်းနေပြန်ပါတယ်။ (တကယ်တော့ ကမ္ဘာ မှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး ဒေသတွေကတော့ ကန္တာရ ဒေသတွေပါ။ နေရောင်ကျရောက်ချိန် များပြီး သာမာန်အားဖြင့်လည်း တစ်ခြားဘာမှလုပ်လို့ မရတဲ့ ပေါများတဲ့မြေ နေရာ ဖြစ်နေလို့ပါ။)
၃။ Municipal and Govern ment Infrastructure Support ကလည်း သိပ် Favorable မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဥပမာ တစ်ခု အနေနဲ့ သူတို့ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေမှာ သင့်ရဲ့ ပိုလျှံတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တွေကို နီးစပ်ရာ အစီုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက တွေရဲ့ မဟာဓါတ်အားလိုင်း တွေထဲကို ပို့ပြီး ရောင်းလို့ရပါတယ်။ သင့်မှာ ဆိုလာစနစ်ရှိတယ် ဆိုပါဆို့။ နေ့ဘက်မှာ သိပ်အသုံးမရှိတဲ့ အတွက် ပိုနေပါလိမ့်မယ်။ ညဘက်မှာတော့ သင့်ရဲ့ ဆိုလာပြားက ဘာစွမ်းအင်မှ ထုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ အဲဒီအခါမှာ မီးထွန်းဖို့၊ ထမင်းဟင်းချက် ဖို့စွမ်းအင်ကို မဟာဓါတ်အားလိုင်းဆီက (သင်ရောင်းတဲ့ဈေးထက် အနည်းငယ် မြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ ပြန်ဝယ်ရပါမယ်။) ပြန်အသုံးချရပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီစနစ်မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ စွမ်းအင် သိုလောင်တဲ့စနစ် တစ်ခုကို ထပ်ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံရအုံးမှာပါ။ အဲဒါကတော့ ဘက်ထရီပါ။(ဒီစရိတ်က ဘက်ထရီ မရှိတဲ့ စနစ်တစ်ခုလုံးစရိတ်ထက် ၁၀၀ % နီးပါးတက်လာအုန်းတဲ့ အပြင် အသုံးပြုမှု သက်တမ်းကလည်း တိုလာအုန်းမှာပါ။ ဆိုလာပြား သက်တမ်းကတော့ ၁၀ နှစ်လောက်ရှိတဲ့အတွက် ပြသာနာ သိပ်မရှိပါဘူး။ ၁၀ နှစ်ကြာတဲ့ အချိန်မှာ ဆီလီကွန် ဆိုလာပြားဈေးနှုန်းကလည်း ခေါက်ချိုးမက ကျသွားမှာပါ။)
၄။ ဝန်ဆောင်တပ်ဆင်ပေးသူ နဲ့ သုံးစွဲသူ ရဲ့ နည်းပညာ ဆိုင်ရာအားနည်းမှုပါ။ လေဒလက် တပ်လို့မှ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ မုတ်သုန်အဝင် လေကြမ်းလို့ စက်ပိုင်းမှာ ဒလက်၊မော်တာနာသွားတာနဲ့။ လျှပ်စစ်ပိုင်းမှာ မီးအဝင်ကြမ်းပြီး ပြသာနာပေးတာနဲ့။ နေစွမ်းအင် ကျတော့လည်း တပ်ဆင်မှု နေရာနဲ့ အနေအထား အကောင်းဆုံး မရတာ။ ဆိုလာပြား ကို ထိမ်းသိမ်းမှုနည်းလို့ စွမ်းအားပြည့် မရတာ။ ဒါက ပြသာနာ တစ်ချို့ပါ။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ရွေးချယ်စရာ လမ်းက မရှိတော့ပြီလား။ အစိုးရရဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်က အားထားမရတော့ အခုလက်ရှိတော့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ပုဂ္ဂလိက မီးပေးစနစ် ပဲ အားကိုးနေရ အုံးမှာပါ။ တစ်ချိူ့ဒေသတွေ မှာဆို ဒီဇယ်ဈေးအတိုင်း လျှပ်စစ်ဈေးက ပေါက်နေတာပါ။ ဒီဇယ် တစ်လီတာ ၁၂၀၀ ကျပ် ဆိုရင် မီးဈေး တစ်ယူနစ် ၁၂၀၀ ကျပ်ပေါ့။ တကယ်တမ်း ထုပ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်က(ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမပါဘဲ) ဆီဈေးရဲ့ တစ်ဝက်လောက် ဘဲ ရှိပါတယ်။ (စကားမစပ် ပုဂ္ဂလိက မီးပေးတဲ့သူကိုပဲ အမြတ်ကြီးစားတယ် လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ဒီပြသာနာ ရဲ့ အဓိက ဇတ်ကောင် က အုပ်ချုပ်သူ ကောက်ရိုးပုံ စောင့်ခွေးပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ - တကယ်တော့ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀၀ ဂစ်ရောင်းလို့ ပိုတဲ့ငွေနဲ့ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ဟောင်းနွမ်းပြီးသုံးမရတော့တဲ့ ဓါတ်အားစနစ်ကို ပြန်အဆင့်မြင့်လို့ရပါတယ်။ လောင်စာကလဲ သူတို့ရဲ့ ဓတ်ငွေ့တွေ ပေါမှပေါပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်း ဒီငွေတွေတစ်ဝက်လောက်က သူတို့ရဲ့လုပ်ထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းဈေးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ငွေစာရင်းထဲကို ရောက်သွားပြီး ကျန်တာတွေက တပ်မတော် စရိတ်ကို ရောက်သွားပြန်ရော။ - တရားမဝင် ဒေသ နားလည်မှုနဲ့ပဲ သူတို့နဲ့ အလွမ်းသင့်တဲ့ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပဲ ပွင့်လင်းတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ တင်ဒါတွေ မရှိပဲ မီးပေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ခိုင်းထားတာပါ။ မရေရာမှုနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု စရိတ် အမြန်ဆုံးပြန်ရအောင်လုပ်ဖို့ရယ်။ ဒီကြားထဲမှာ သူတို့ရဲ့ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာတွေကို အလကားပေးထားတဲ့မီးရယ်၊ လက်ဖက်ရည်ဖိုး - ဒီလက်ဖက်ရည်ဖိုးနဲ့ပဲ တိုက်တွေဆောက်ကြတာ မနည်းတော့ပါဘူး - တွေကြောင့် ပုဂ္ဂလိက မီးဈေးက ဒီလောက် ဖြစ်နေတာပါ။
ဒီတော့ လောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်တာကတော့ စွမ်းအင်ချွေတာရေး လုပ်ဖို့ပါပဲ။ သင့်ရဲ့မီးချောင်းတွေ။ တီဗွီ၊ ရေခဲသေတ္တာ တွေကို စွမ်းအင် Efficiency ပိုရှိတဲ့ ဟာနဲ့အစားထိုးတာတွေ၊ အသုံးမလိုတဲ့ နေရာမှာ မလိုအပ်တဲ့ မီးတွေပိတ်ထားဖို့ ဆိုတာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလောင်စာ ပြသာနာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့လူနေမှုစရိတ်။ ငွေဖောင်းပွမှုတွေ အများကြီးလိုက်တက်လာ ဖို့ ရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဟိုတစ်လောက သတင်းစာ ထဲမှာ ပါသလို နွားနဲ့ ’မီးထွန်း’ ဖို့ ကိုတော့ မစဉ်းစားကြပါနဲ့။ ဒါဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးမှာ သင်ကိုယ်တိုင် ဝင်ပြီး နွားဝင်လုပ်နေရမှာပါ။ :)
Labels: လူမှုဘဝ, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ
ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလက ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဖူးခက်သို့အသွား အအေးခန်းကားပေါ်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံသား (၅၄) ဦး လေမွန်းကျပ်ပြီး သေဆုံးပြီး နောက်ပိုင်း ကော့သောင်းမှ လူကုန်ကူးမှုနှင့် ပတ်သက်နေသူများကို ပြီးခဲ့သည့် လကုန်ပိုင်းမှစ၍ ဆက်တိုက် ဖမ်းဆီးလျက် ရှိသည်။
လက်ရှိအချိန်ထိ တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်များ၊ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ သမားများအပါအ၀င် လူကယ်ရီဟု ယူဆရသူ (၃၀) ကျော်ကို ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်မှ တိုက်ရိုက် ဆင်းလာသည့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (အက်စ်ဘီ) မှ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးနေကြောင်း နယ်ခြား ကော်မတီနှင့်နီးစပ်သည့် ကော့သောင်းမှ မြန်မာကုန်သည်ကြီးတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “တချို့ကလည်း ငွေလွှဲနဲ့ပတ်သက်တယ်။ တချို့က ပက်ကေခ်ျ့နဲ့ပတ်သက်တယ်။ တချို့က တည်းခိုခန်းတို့၊ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပုိ့တာတို့ပေါ့။ အဲဒီလုပ်ငန်းကလည်း တမြို့လုံးလိုလို တခုမဟုတ်တခုနဲ့ပတ်သက်နေတော့ အဆွဲခံရမလားဆိုပြီး ရှောင်တဲ့သူလည်း တော်တော် များတယ်။ အရင် ကော့သောင်းက အက်စဘီဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဦးသောင်းအေး၊ သူ့ကို ဘာသာ ပြန်ပေးနေတဲ့ ဦးအောင် တို့ဆိုတာ တိုက်ရိုက်ကိုပတ်သက်နေတယ်လေ။ အဲလို လူတွေက ပထမတော့ ဆန္ဒခံယူပွဲအမီ ကော့သောင်းပြန်လာပါမယ်ဆိုပြီးမှ လုံးဝမလာရဲတော့ဘူးလေ” ဟု ပြောသည်။
စောစောပိုင်းက နယ်မြေခံရဲ၊ စစ်တပ်နှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကဲ့သို့ အစိုးရ၀န်ထမ်းများလည်း လူကုန်ကူးမှုများတွင် တနည်းမဟုတ် တနည်း ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု သတင်းများထွက် ပေါ်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိ ၎င်းတို့အား ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်းမရှိသေးပေ။
ကော့သောင်းသို့ ရောက်လာသူများသည် ၎င်းတို့သွားရောက်မည့် ဒေသခံများထံမှ နေရပ် လိပ်စာအပြည့်အစုံ သန်းကောင်စာရင်း (ပုံစံ-၁၀) စသည်တို့ ပြသနိုင်မှသာ မြို့တွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခွင့်ရကြသည်။
ကော့သောင်းမှ မြို့မျက်နှာဖုံးတဦးဖြစ်သူ ရွှေကမ္ဘာတည်းခိုခန်းပိုင်ရှင် ဦးဝင်းနိုင်သည် မြန်မာ နိုင်ငံသား (၅၄) ဦး သေမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထိုင်းဘက်ကမ်းသို့ သွားရောက်တိမ်းရှောင် နေရာမှ ဇွန်လ (၃) နေ့က လာရောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ပြီး ၎င်း၏ဇနီးမှာ အခင်းဖြစ်ပွားပြီး ရက်ပိုင်း အတွင်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိလည်း ရနောင်းတွင် တိမ်းရှောင်နေသူအချို့ကို မြန်မာဘက်မှ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ထိုင်း အာဏာပိုင်များက ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ကော့သောင်းမှ အဆိုပါကုန်သည်ကြီးက ပြောသည်။ ။
via New Mandala by Nicholas Farrelly on 6/22/08
A New Mandala reader has sent through the following interesting reflections on genetics, culture and nationality in mainland Southeast Asia:
I was just browsing the Democratic Voice of Burma's archive, and found this interesting yet disturbing story. It's about DNA testing in NW Thailand to identify ethnicity and nationality of migrant workers. It is disappointing to witness suchagap between social scientists and natural scientists. While the former are talking about social construction of ethnicity, the latter are trying to categorize people according to biology, which is (or may lead to??)aform of racism. I wonder how they will genetically define nationality, whereas it is even impossible to socially define what constitute "Burmese" or "Thai". Here is the text from the DVB (another report from the Chiang Mai Mail follows).
Jan 16, 2008 (DVB) – A group of World Health Organisation officials and professors from Chiang Mai University collected DNA samples from 300 Burmese migrants yesterday at Dr Cynthia Maung's Mae Tao clinic in Mae Sot, Thailand.
Here is another similar report from Chiang Mai Mail in 2004. I wonder how DNA will play out in citizenship issue in Northern Thailand.
Hilltribe nationality problems all "Thai'd" up
The aggrieved minority group appealed to the Ministry of Justice, calling for what they called 'justice' to be applied fairly to them. Finally in response to their claims, Somchai Wongsawas, the permanent secretary of state for the Ministry of Justice, accompanied by Khunying Dr Pornthip Rojananand, the director of the Central Forensic Science Institute visited the people in Mae Ai to investigate their problems.
The Ministry of Justice wanted show the villagers that they were not forgotten and suggested the Forensic Science Institute could help prove their race by DAN testing.
She added, "In Mae Ai district, at present, it has been found that there are some groups of people that could not have their background identified with DNA testing for their parents and relatives.
"The next step is that the Local Administration Department must find the other persons to help in searching for their race, persons who could identify and certify their background before being granted Thai nationality," she said.
via Bangkok Pundit by Bangkok Pundit on 6/18/08
Simon Montlake in CSM:
journal by Zaung, your friend u ottama 's friend
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း (သို့) ထိုင်းနယ်စပ်တွင် လူများအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဖုန်းနံပါတ်ကဒ် ( Sim Card ) များကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနေသော Sim Card ကုမ္မဏီင်္ကြီး သုံးခုရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ Dtac, One2Call နှင့် Orange(Truemove)တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း Sim Card များကို ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်များထဲမှ ထိုင်းနယ်စပ် မြန်မာတွင် တာချီလိတ်မြို့၊ မြ၀တီ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်နီးသော နယ်စပ်မြို့များတွင်လည်းအသုံးပြုလို့ရပေသည်။ ၄င်း Sim Card တွေ၏တန်ဖိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကလို ကျပ် သိန်း ၂၀ ကျော်လောက်တော့ မပေးရပါ။ ထိုင်း Sim Cardတစ်ခု၏ တန်ဖိုးသည် ထိုင်းငွေ ၄၉ဘတ်မှ ၂၅၀ဘတ်အထိသာရှိပါသည်။ကျပ်ငွေဖြင့်တွက်ရသော် ၁၅၀၀ကျပ်မှ ၈၅၀၀ ကျပ်အထိသာ။ လက်ထဲမှာ ထိုင်းငွေ ဘတ်500(သို့)မြန်မာငွေ 12000ကျပ်ကျော် လောက်ရှိရင်ဖြင့် အကောင်းစားမဟုတ်ရင်တောင်မှာ အပေါစားဖုန်းတစ်လုံးတော့ ကိုင်ဆောင်လို့ရပေမည်။ ထို့ကြောင့် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တာချီလိတ်မြို့တွင် ပလပ်စတစ်ကောက်သမားကအစ ဖုန်းကိုင်ဆောင်နိုင်သည်မှာ ဧကန်အမှန်ဖြစ်ပေသည်။ စီးပွားရေးသမားတွေလည်း ထိုင်း Sim Card တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် အလွယ်တစ်ကူ အလုပ် လုပ်ကိုင်နိုင်ပေသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း (သို့) ထိုင်းနယ်စပ်တွင် နေကြ၍ ထိုင်း Sim Card များကို အသုံးပြုသူများအတွက် Dtac, One2Call နှင့် Orange(Truemove)တို့တွင် Dtac အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်းကို တင်ပြအပ်ပေသည်။
*101*9# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် မိမိဖုန်းတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခ မည်မျှကျန်သည်ကို ဖော်ပြပေမည်။
*101# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် မိမိဖုန်းတွင် ထိုင်းဘာသာဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခ မည်မျှကျန်သည်ကို ဖော်ပြပေမည်။
*102*9# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် မိမိဖုန်း၏ Simcardဖုန်းနံပါတ် ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
*102# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် မိမိဖုန်း၏ Simcardဖုန်းနံပါတ် ကို ထိုင်းဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
*103*9# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် မိမိဖုန်း၏ Promotion call ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
*103# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် မိမိဖုန်း၏ Promotion call ကို ထိုင်းဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
*104*9# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် GPRS ဖွင့်ရန် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
*104# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် GPRS ဖွင့်ရန် ထိုင်းဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
*108*9# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် ယခင်လနှင့် ယခုလတွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့သော ကုန်ကျငွေစာရင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
*108# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် ယခင်လနှင့် ယခုလတွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့သော ကုန်ကျငွေစာရင်းကို ထိုင်းဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
*110*9# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် ချီးငွေ ၃၀ဘတ်ကို ထုတ်ပေးပြီး ငွေချီးအခကို ၂ဘတ် ပေးဆောင်ရမည် ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
*110# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် ချီးငွေ ၃၀ဘတ်ကို ထုတ်ပေးပြီး ငွေချီးအခကို ၂ဘတ် ပေးဆောင်ရမည် ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
*112*0875833803*20*9# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် မိမိဖုန်းထဲမှ ငွေကို တစ်ခြားတစ်ဦးကို လွဲလို့ပါက လွဲလို့ရနိုင်ပါသည် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
*112*0875833803*20# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် မိမိဖုန်းထဲမှ ငွေကို တစ်ခြားတစ်ဦးကို လွဲလို့ပါက လွဲလို့ရနိုင်ပါသည် (ထိုင်းဘာသာ)
သတိပြုရန်။ ။ 112 ၏အနောက်တွင်ရှိသော ဖုန်းနံပါတ်၁၀လုံးမှာ လွှဲလို့သောသူ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို နိပ်ရပြီး နံပါတ်၁၀၏နောက်တွင် 20 ဆိုသောနေရာတွင် 20 မှ 200 အထိ လွှဲလို့ရပါသည်…။ ငွေလွှဲခကိုတော့ 2ဘတ်သာယူပါသည်။ Dtac တစ်ခုတည်းသာ။
*113*30*9# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် မိမိဖုန်း၏သက်တမ်းသည် ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်တိုးလာပါမည်။( အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
*113*30# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် မိမိဖုန်း၏သက်တမ်းသည် ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်တိုးလာပါမည်။(ထိုင်းဘာသာ)
သတိပြုရန်။ ။ 113 ၏နောက်တွင် 30, 60, 90, 120, 150, တိုးလိုသော ဂဏန်းများကိုနိပ်ထည့်ပါက မိမိဖုန်းတွင်လိုချင်သော သက်တမ်းရပါမည်။
ရက်ပေါင်း 30 ဆယ် ကို ၀န်ဆောင်ခ 2ဘတ်ပေးဆောင်ရပါမည်။ တစ်လကို2ဘတ်ဖြစ်၍ ရက်ပေါင်း150 ဆိုရင် ၀န်ဆောင်ခ 10ဘတ်သာ။
*114*0875833803*9# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် တစ်ဖက်ဖုန်းတွင် ဖုန်းပြန်ဆက်လာပါရန်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
*114*0875833803# ကိုဖုန်းတွင် နိပ်ထည့်၍ call လိုက်ရင်ဖြင့် တစ်ဖက်ဖုန်းတွင် ဖုန်းပြန်ဆက်လာပါရန်ကို ထိုင်းဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေမည်။
သတိပြုရန်။ ။ 114၏ နောက်တွင် ဖုန်းနံပါတ်ဆယ်လုံးသည် ဖုန်းပြန်ဆက်လာစေလိုသော ဖုန်းနံပါတ်ကို နိပ်ပါလေ။ ၀န်ဆောင်ခကို ပေးဆောင်စရာမလိုပါ။
အသုံးလိုသော ကုတ်များကိုသာ ကြေငြာပေးလိုက်ပါသည်။
ต้นสาคูเป็นไม้ยืนต้น จะมีลักษณะกลม เมื่อต้นแก่เต็มที่จะมีจั่นดอก แตกออกตรงส่วนยอด ลำต้นคล้ายมะพร้าว มีความสูง 10-20 เมตร มีเปลือกห่อหุ้ม แต่ไม่มีกิ่งสาขา
สาคู เป็นพืชท้องถิ่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซีย นิวกินี อินโดนีเซีย และหมู่เกาะต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับประเทศไทยมีในภาคใต้ เช่น จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล ฯลฯ บริเวณสภาพที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำลำคลอง หรือในพื้นที่ที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำลำคลอง หรือในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำไม่ดี พืชเศรษฐกิจไม่สามารถขึ้นได้ จะมีต้นสาคูขึ้นเรียงรายอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ และสามารถเจริญเติบโตได้ดี เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในตระกูลปาล์ม มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Metroxylon sagus
เป็นพืชที่ให้คุณประโยชน์กับชาวบ้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของผู้คนมาช้านาน แต่จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้ป่าสาคูลดปริมาณลง สาคูสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์โดยใช้ส่วนแกน กลางของลำต้นซึ่งจะมีแป้งมาก เกษตรกรนิยมตัดเป็นท่อน ๆ ปอกเปลือกผ่ากลางลำต้นนำไปวาง ให้สุกร เป็ด ไก่แทะและจิกกินเป็นอาหาร บางรายขูดหรือบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ตากให้แห้งเพื่อเก็บไว้ใช้ได้นาน ๆ หรือนำไปผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทอื่น ๆ เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
สาคูสามารถนำมาสกัดเป็นแป้งได้เมื่ออายุ 9-10 ปี ซึ่งเป็นระยะตั้งท้อง เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตอย่างหนึ่งที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ในปัจจุบัน มีพลังงานสูงมาก แต่จะมีโปรตีนและไขมันต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับแป้งจากข้าวและมันสำปะหลัง
โดยเฉพาะที่ช่วงความสูง 7.5 ถึง9เมตร จากพื้นดินจะมีแป้งมากที่สุด สาคูต้นหนึ่งจะสามารถผลิตแป้งได้ประมาณ 100-500 กก. การนำไปทำแป้ง ต้องทำหลังจากโค่นต้นสาคูภายใน 1 สัปดาห์ มีโปรตีนต่ำประมาณ 1-2% ไขมันต่ำประมาณ 1% และมีแร่ธาตุต่ำ มีเยื่อใยสูงประมาณ 10% สาคูบดและตากแห้งสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารได้เช่นเดียวกับมัน เส้น เนื้อในลำต้นของสาคูนำมาทำแป้งสาคูทำขนม หรือแป้งดิบทำอาหารสัตว์ อาทิ เป็ด ไก่ ปลา หรือหมูพื้นบ้าน กินได้ ตลอดจนนำลำต้นเลี้ยงด้วงสาคู ก็ได้เช่นกัน
เปลือกนอก ใช้ทำเชื้อเพลิง กระถางต้นไม้หรือปูพื้น ใบนำมาเย็บเป็นตับจากสำหรับมุงหลังคาและกั้นฝา และห่อขนมจาก ตับจาก จากใบสาคูมีความทนทานกว่าตับจากที่ทำจากใบปาล์มชนิดอื่น ๆ โดยปกติตับจาก จากใบสาคูจะมีอายุการใช้ประโยชน์ 6-10 ปี และหากนำไปแช่น้ำประมาณ 15 วันถึง 1 เดือนก่อนนำมาใช้งาน อาจใช้งานได้นานกว่า 10 ปีทีเดียว ปัจจุบันมีการผลิตออกจำหน่ายแถบจังหวัดตรังในราคาตับละ 8 บาท ก้านใบย่อยใช้ทำไม้กวาด ยอดอ่อนสาคูนำมารับประทาน หรือแกงส้มก็ได้
เปลือกนอกของทางสาคู นำมาลอกเอาเฉพาะส่วนเปลือกทำเป็นตอกใช้สานเสื่อ หรือนำทางสาคูแห้งมากั้นทำคอกเป็ด ไก่ ทางสาคูแต่ละอันยาวประมาณ 3-4 เมตร เลยส่วนกาบขึ้นไปจะกลมและเรียวไปหาปลายทาง ถ้าตัดปลายทิ้ง ให้เหลือยาวประมาณ 1-2 เมตร นำมาลอกเอาส่วนเปลือกนอกซึ่งเรียกว่า หน้าสาคูทำเป็นตอก ใช้สาน เสื่อ กระบุง กระด้ง รวมทั้งทำเครื่องมือประมง ทางสาคูเมื่อนำมาตากให้แห้งสามารถใช้ทำคอกเป็ด ไก่ ได้ ซึ่งจะมีอายุการใช้งานได้ประมาณ 1-2 ปี หรือทำรั้วกั้นสวนผัก นำมาตกแต่งโรงร้าน ทางสาคูมีไส้ในอ่อนนุ่มแต่เหนียวสามารถนำมาทำจุกขวด หรือปิดปากกระบอกข้าวหลาม หรือนำมาใช้แทนโฟมก็ได้
น้ำเลี้ยงของทางสาคู เป็นกาวปิดกระดาษ เป็นยาพื้นบ้านรักษาเริม ทาใบหน้าให้ขาวนวล หรือรักษาสิว ฝ้า รากแขนง เป็นยาพื้นบ้านรักษาอาการปวดหัว ผลสุก จะมีรสหวานและฝาด เป็นยาพื้นบ้านช่วยลดความดันโลหิตสูง และบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
นับเป็นพืชท้องถิ่นของไทยมีคุณมากมายหลายประการ หากแต่ในบางครั้งอาจจะมีการลืมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ ตอนนี้ต้นสาคูน่าจะก้าวเข้ามาเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ภาคใต้ได้ไม่น้อยทีเดียว เพราะสาคูสามารถขยายพันธุ์ เพื่อการนำมาขยายพื้นที่ปลูกสำหรับใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้ค่อนข้างรวด เร็วนั่นเอง.
Ricardo Radulovich6June 2008
Labels: Agri and Fishery, Energy
Myanmar junta detains cyclone-affected "boat people" (Extra)
Bangkok - The Myanmar navy has arrested 65 people, including 15 children and 20 women, who attempted to flee the country's cyclone-hit Bogalay township,aMyanmar pro-democracy group said on Sunday.
The boat-load of people were arrested on June2near Zardatgyi Island west of Kawthaung town by Navy Ship No 517, according to the Network for Democracy and Development (NDD) group, which is based on the Thai-Myanmar border.
'They left Bogalay by boat on May 24 aiming to take refuge in refugee camps at Thai border,' the NDD said inastatement.
The 65 people had reportedly lost their belongings and homes in Cyclone Nargis that hit Myanmar's central coastal region on May 2-3, leaving at least 133,000 people dead or missing.
One month after the storm, unknown thousands have yet to receive emergency aid, with many of them residing in remote coastal enclaves in the Irrawaddy delta, according to international aid workers.
'This is the first-time we heard that the cyclone victims take risks to leave their villages by boats like those from Vietnam, Laos and Cambodia in the past,' said the NDD.
Millions of so-called 'boat people' fled Vietnam and Cambodia during after 1979, in the aftermath ofashort Chinese invasion of Vietnam to teach Hanoialesson for invading Cambodia the same year to topple the pro-Beijing Khmer Rouge regime.
The resulting political turmoil prompted more thanamillion Sino-Vietnamese to flee southern Vietnam on flimsy boats to Thailand and other non-communist countries in South-east Asia, whileasimilar land and sea exodus occurred in Cambodia of people seeking to flee Khmer Rouge rule.
Myanmar, which has been under military dictatorships since 1962, has been the source of constant outflow of political and economic refugees since 1988, when the army cracked down onapro-democracy movement inamassacre that claimed an estimated 3,000 lives and resulted in the imprisonment of thousands.
More than 1 million Burmese currently work in neighbouring Thailand as illegal or semi-illegal labourers, while hundreds of thousands reside in temporary border camps awaiting resettlement orareturn of stability to their country.
Cyclone Nargis may now be prompting another exodus, as thousands go without proper emergency assistance in the Irrawaddy delta,asituation many blame of the government's reluctance to facilitateafull-fledged international emergency assistance program in the storm-battered country.
'More victims will come out until and unless there is immediate and effective rescue and relief program,' said the NDD.
There are reports that at least 100 cyclone victims from the delta or Yangon have travelled to Mae Sot,aThai border town, to seek assistance, according to the Irrawaddy Magazine,amonthly published outside Myanmar that monitored Myanmar-related issues.
บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน(บัตรเลขศูนย์) - what is its status?
บัตร ประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบัตรที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ที่นำหน้าด้วยเลข0เป็นบัตรที่ใช้แสดงตนสำหรับบุคคลที่ไม่มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎร หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยผู้ที่มีบัตรแสดงตัวดังกล่าว เป็นกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยที่มีความเกี่ยวพันกับผู้ที่ได้รับ การจัดทำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิมแต่ตกสำรวจ
โดยบุคคลใน กลุ่มหมายเลขนี้ เป็นบุคคลที่จะต้องอยู่ในเขตที่ทางราชการผ่อนผันเท่านั้น หมายถึง จะต้องอยู่ในเขตอำเภอที่ได้ลงทะเบียนสำรวจไว้ในขณะที่ทำการสำรวจทางทะเบียน ประวัติ แต่บัตรฯดังกล่าวไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชน บุคคลดังกล่าวจะมีบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อได้สัญชาติไทยเท่านั้น โดยจะต้องได้รับการกำหนดสถานะตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ บุคคล ตามที่ทางราชการจะได้กำหนด และประกาศให้ทราบต่อไป
I mentioned the Panties for Peace campaign where women are encouraged to send their panties to the generals controlling Myanmar in order to drain their power. I was watching the show Woman to Woman on TV yesterday morning and they talked about that campaign and showedapicture ofabirthday cake that was made for the junta leader Than Shwe. The cake is shaped like ladies' panties and hasapicture of Than Shwe on the crotch and on his head are more panties. It's insulting, for sure. But I'm not sure it will drain his powers. I read that they believe they must actually touch women's panties to lose power. Hmmm. Their lovemaking skills must really be lacking, hehe.
Ref: Asian Sweet Heart